Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Kambani Itsva Yezvinodhaka Inodaidza Mitengo Yakaderera pane 100 Lifesaving Prescriptions
Mark Cuban Cost Plus Drug Company (MCCPDC) nhasi yaparura zviri pamutemo pharmacy yayo yepamhepo costplusdrugs.com. Kuparurwa uku kunouya masvondo mashoma mushure mekunge maneja wavo wezvemishonga (PBM) atanga - zvese zviri zviviri kuedza kwakasimba mukutsvaga kwekambani kubatsira kudzivirira vatengi kubva kumitengo yezvinodhaka.
Sekureva kwesarudzo yaGunyana 2021 yeGallup, mamirioni gumi nemasere vanhu vekuAmerica nguva pfupi yadarika havana kukwanisa kubhadhara mushonga mumwe chete wavakanyorerwa nemhuri yavo nekuda kwemitengo inogara ichikwira, uye munhu mumwe chete pagumi vekuAmerica akasvetuka madosi kuchengetedza mari. Kutangwa kwechitoro chemishonga kunomiririra chiitiko chekutanga chakakosha mukuunza mishonga inodhura kumamiriyoni.
Mishonga inocherechedzwa inotaridza kuchengetedza kunoshamisa kwekemisi inosanganisira:
• Imatinib - kurapwa kweleukemia
o Mutengo wekutengesa: $9,657 pamwedzi
o Mutengo wakaderera nevoucher yakajairika: $120 pamwedzi
o MCCPDC mutengo: $47 pamwedzi
• Mesalamine - kurapa ulcerative colitis
o Mutengo wekutengesa: $940 pamwedzi
o Mutengo wakaderera nevoucher yakajairika: $102 pamwedzi
o MCCPDC mutengo: $32.40 pamwedzi
• Colchicine - kurapwa kwegout
o Mutengo wekutengesa: $182 pamwedzi
o Mutengo wakaderera nevoucher yakajairika: $32 pamwedzi
o MCCPDC mutengo: $8.70 pamwedzi
"Tichaita chero zvingatora kuti tiwane mishonga inokwanisika kuvarwere," akadaro Alex Oshmyansky, CEO weMark Cuban Cost Plus Drug. “Mucherechedzo wezvinodhaka zvinogona kuponesa upenyu izvo vanhu vanotsamira pazviri idambudziko risingagoni kufuratirwa. Zvakakosha kuti titore matanho uye tibatsire kuwedzera kuwaniswa kwemishonga iyi kune avo vanoida zvakanyanya. "
Semutengesi wemishonga akanyoreswa, MCCPDC inogona kupfuura vanhu vari pakati nepakati uye zvinokatyamadza. Mitengo yemushonga yemishonga inoratidza mitengo chaiyo yevagadziri pamwe negumi neshanu muzana muganho uye muripo wemufesi. Nerubatsiro rwekambani yehutano yedhijitari yeTruepill, varwere vanogona kutarisira isina musono, yakachengeteka e-commerce ruzivo sezvavanofamba pawebhusaiti yemishonga, yakavakwa uye inofambiswa neTruepill's digital health platform. Varwere vachanakidzwawo nekuzadzikiswa kwakavimbika kwemishonga uye kuendesa kuburikidza neTruepill yenyika yese pharmacy tsoka tsoka.
Nekuti iyo kambani inoramba kubhadhara mitengo yakapararira kune vechitatu-bato PBMs kuitira kuti vabvumidzwe kugadzirisa zvichemo zveinishuwarenzi, iyo online pharmacy ichava yekubhadhara mari. Nekudaro, modhi yayo inoreva kuti varwere vanogona kubva vatenga huwandu hwakawanda hwemishonga pamitengo kazhinji yakaderera pane izvo zvirongwa zveinishuwarenzi 'zvinobviswa uye copay zvinodiwa.
Muna Mbudzi 2021 MCCPDC yakapinda muindasitiri yePBM kuti ishandire makambani anopa kuvharwa kwemishonga muzvirongwa zvavo zvekubatsirikana kwevashandi. MCCPDC yakavimbisa “kubuda pachena” munhaurirano dzayo nemakambani ezvinodhaka sePBM, ichiburitsa pachena mutengo chaiwo wainobhadhara pamishonga uye kubvisa mitengo yekupararira uye kurudziro yekudzoserwa isiriyo. MCCPDC inotarisira kuti PBM yayo inogona kuchengetedza makambani mamirioni emadhora pasina shanduko kune yayo mabhenefiti, zvichienderana nehukuru hweanoshandira, nekuti ichabvisa yechinyakare PBM modhi. Iyo kambani inoronga kubatanidza chitoro chemishonga uye mutengesi nePBM yayo, saka chero kambani inoshandisa PBM yayo ichawana mukana wekutengesa mutengo kuburikidza neinternet pharmacy.
"Kune vanhu vazhinji vakaipa muchikamu chemishonga inodzivirira varwere kuwana mishonga isingadhuri," akadaro Oshmyansky. "Nzira chete yekuita kuti mitengo inokwanisika isvike ndeyekubatanidza wakatwasuka."